Iindaba -Imfuno yentengiso yeiglavu ezilahlwayo
Imfuno yeiglavu yahlulwe yangamacandelo amane; Unonophelo lwezonyango, i-inshurensi yezabasebenzi, ushishino kunye nevenkile ezinkulu, kunye nemizi-mveliso yenkonzo. Phakathi kwazo, iiglavu zonyango kunye neigloves zabalelwa kwi-62% yosetyenziso lulonke.
Ngokwengxelo yeZiko laseYurophu loLawulo lweNtsholongwane kunye noThintelo ngo-Okthobha 21, 2020, ukusetyenziswa kweigloves kufuna ukuba bonke abasebenzi bezonyango batshintshe iiglavu ngalo lonke ixesha bedibana nezigulana ezahlukeneyo (ukuba akukho zimo, kufuneka ubulawe iintsholongwane ukuze kugcinwe ucoceko).
Imfuno ebangelwe ngulo bhubhane inyuke kakhulu, kwaye ibango lilonke liphindwe kabini kunaphambi kobhubhane. Isithsaba esitsha sokukhusela intsholongwane e-US sifuna ukunyuka ekusebenziseni iiglavu ezilahlayo. Ngokukodwa, ukunxibelelana kwemihla ngemihla kwabaguli abagula kakhulu kwi-ICU kufuna i-170 * 2 = 340. .
Emva koqhambuko, inkqubo yezempilo yase-United States ibango leiglavu ze-nitrile inyukile ukusuka kwi-2.65 yezigidigidi ngenyanga ngaphambi kokuqhambuka ukuya kwi-10 yezigidigidi ngenyanga (ngaphandle kokusetyenziswa kwabantu ngokubanzi), ephindaphindwe kathathu kuneyokuqala. Phakathi kwazo, imfuno yezibhedlele ezikhanyayo ifikelele ngaphezulu kwe-4 yezigidigidi ngenyanga. Umtshangatshangiso wesibini wobhubhane ekupheleni kukaNovemba waba nzima kakhulu.
Ngexesha lobhubhane, ukusetyenziswa kweiglavu kwizibhedlele kwandiswe ngamaxesha ama-2-3. Isizathu sokwanda okukhulu ekusetyenzisweni kwesibhedlele kunokuba kukuthintela usulelo olunqamlezayo. Ngoku ukusetyenziswa komongikazi omnye amaxesha angama-3-4 kakhulu kunangaphambili.
Kwicala leiglavu ezilahlwayo zerabha, imveliso yonyaka engama-296 yezigidigidi ngo-2019, eyi-180 yezigidigidi eMalaysia ebala kuphela iipesenti ezingama-63 zesabelo sentengiso, ngelixa i-China ivelisa malunga neebhiliyoni ezingama-25 iiglavu ze-nitrile kunye nezinye iiglavu zendalo. 10%. Nangona kunjalo, ukuba kubalwa ngokwe-495 yezigidigidi zeglavu ezilahlwayo ngo-2019, i-China kusafuneka yongeze i-80 yezigidigidi zemveliso ye-PVC kunye nezinye iintlobo zeglavu ezilahlwayo ezinje nge-PE / TPE, kwaye isabelo sase China simalunga ne-20-40%.
Ngexesha lobhubhane, ibango leiglavu ezilahlayo likhule ngokukhawuleza. Ukulwa ubhubhane, ilizwe ngalinye kufuneka lingenise inani elikhulu lezixhobo zokulwa ubhubhane. Iiglavu ezilahlwayo ziphakathi kwazo. Nangona kunjalo, ngenxa yefuthe lobhubhane, ukuhanjiswa komvelisi wokuqala kunzima kwaye ukuhambisa ngenqanawa kunzima kakhulu. Ke ngoko, abatyali mali abaninzi ngoku bafuna ukwakha umgca weiglavu we-nitrile / latex / PVC kwilizwe labo, ukuze bakwazi ukuhlangabezana nemfuno yeglavu yalapha. Kwaye uChuangmei ubonelela ngezixhobo zeglavu ze-nitrile / latex / PVC.